Al-Shabaab Oo Sidan Uga Hadlay Ciidankii Eriteriya Loo Qaaday | Xaqiiqonews
Al-Shabaab Oo Sidan Uga Hadlay Ciidankii Eriteriya Loo Qaaday
Idaacadda afka Al-shabaab ku hadasha ee andulus ayaa sii deysay wareysig ay ka qaaday Sheekh Muuse Caraale oo Al-shabaab ugu magacaaban waaliga Gobolka Benaadir.
XAQIIIQO NEWS- WARARKA GUDAHA
Wareysiga oo dhinacyo badan kaga hadlay ayuu Caraale ku sheegay in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday afaafka hore ee xerada tababarka ciidamada ee TurkSom.
Caraale ayaa sidoo kale soo hadal qaaday sida ay Al-shabaabka uga walaacsanyihiin dadaalada Turkiga uu ku bixinaayo dhismaha ciidamada Soomaaliya, waxa uuna Turkiga ku tilmaamay “Al-shahaado la dirir”.
Sidoo kale Aqri: Xogta Iyo Qabiilada Madaxda Al-shabaab Ee Xayiraadda La Saaray
Ugu dambeyntii Sheekh Caraale ayaa carab dhabay in ay la socdaan waxa ka socda Xamar waxa uuna xusay wax uu ku tilmaamay “Ciidamo been loo sheegay” isaga oo yiri “Waxaa lagu yiri qadar ayaad lacag ka soo xaabsaneysaan”.
Dhanka kale Waaliga Al-shabaab ee Benaadir ayaa soo hadal qaaday mashruuc Banaadir ka socd oo uu sheegay in ay dhiiri geliyaan hay’ado fadhiya Xalane, kaasi oo lagu kala iibsado caruurta laguna kufsado dumarka- sida uu hadalka u dhigay.